चीनमा प्रदर्शन गरियो ‘नेपालको ऐना’ — Newskoseli
चीनमा प्रदर्शन गरियो ‘नेपालको ऐना’
काठमाडौं, १४ मंसिर ।
कलाकार लिउ फिङ छिउले नेपाल सम्बन्धमा कोरेका चित्र चीनको च्यांङ्सु प्रान्तको छाङ्चाैं महानगरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपाल भ्रमण गरी फर्किएपछि लिउले ४ वर्ष लगाएर कोरेका ९० चित्रकला समावेश गरी लिउ हाइ सु ग्यालरीमा ‘मिरर अफ नेपाल’ (नेपालको ऐना) शीर्षकमा एकल चित्रकलाको प्रदर्शनी बुधबार सम्पन्न गरेका हुन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी छाङ्चौं महानगर समिति, संस्कृति, सञ्चार तथा प्रकाशन कार्यालय र च्याङ्सु कलाकार संघले आयोजना गरेको प्रदर्शनी पाँच दिनसम्म चलेको थियो ।
चित्रकला प्रदर्शनीका लागि छाङ्चौं कलाकार संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रताका लागि चिनियाँ जनसंघ छाङ्चौंलगायतले सहयोग पुर्‍याएका थिए । चिनियाँ मसी, कुची र कागजमार्फत नेपालको रहनसहन, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधतालगायत विषयलाई आफूले चित्रमा उतारेको सन् २०१३ मा नेपाल भ्रमण गरेका लिउले बताए । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले सन्देश पठाई कलाकार लिउको कलामा नेपालको संस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्य र विविध जनताको चित्रण गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
चिनियाँ कलाकार संघलगायत थुप्रै संघ–संस्थामा आबद्ध ६८ वर्षीय लिउका चित्रले थुप्रै राष्ट्रियस्तरका पुरस्कार पाएका छन् । उनको चित्रकला चीनको राष्ट्रिय कला संग्रहालय, चिनियाँ केन्द्रीय ललितकला प्रतिष्ठानलगायत संस्थामा संग्रह गरिएका छन् । प्रदर्शनीका लागि अमेरिका, जापान, स्पेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियालगायत देश पुर्‍याइएका उनका चित्र विदेशमा पनि संग्रह गरिएका छन् ।
वरिष्ठ लेखक–साहित्यकार साहनीमाथि दुर्व्यवहार : चौतर्फी विरोध र आपत्ति
स्कुल बस दुर्घटना : २२ विद्यार्थी घाइते, चालकको अवस्था गम्भीर
कहाँ पुग्न कति लाग्छ गाडी भाडा ? (देशभरको नयाँ भाडासूची सहित)
गोरु ठानेर लखेट्दा भालुको आक्रमण, मानबहादुरको गुप्ताङ्गमा गम्भीर चोट
नेपाल टेलिभिजनले सुरु गर्‍यो संस्कृतमा पनि समाचार !
श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमती ठहरै !